घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्विस फुटबल खेलाडीहरू ग्रेटिट Xhaka बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल जीनियसको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ, जो उपनाम द्वारा प्रख्यात छ; 'Xhakaboom'। हाम्रो Granit Xhaka बचपन कहानी प्लस बायोग्राफी तथ्य तपाईं को लागी आफ्नो बचपन को समय देखि आज सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूरा खाता तपाईं लाई।
स्विस फुटबलरको विश्लेषणमा ख्याती, पारिवारिक जीवन, सम्बन्ध जीवन र उहाँबारे धेरै तथ्यहरू अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ।
हो, सबैलाई आफ्नो मिडफिल्ड क्षमताहरूको बारेमा थाहा छ तर थोरैले ग्रानिट झाकाको बायोलाई विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Granit Xhaka बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
ग्रानिट झाका सेप्टेम्बर १ 27 1992 २ को २ XNUMX तारिख स्विजरल्याण्डको बासलमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, एल्मेजे झाका र उनका बुबा, रागीप झाकाको जन्म भएको थियो। उनका अल्बेनियाली अभिभावक मूल कुरबुलिजा, सर्बियाका थिए।
ग्रानिट झाको प्रारम्भिक जीवन कहानी बुझ्नको लागि उनको परिवारलाई बुझ्नु हो; कसरी तिनीहरूले कष्ट भोगेका छन्, कसरी तिनीहरूले एकसाथ खिचेका छन् र पार गर्न अथक प्रयास गरेका छन्।
सब भन्दा नम्रताबाट, युवाको शिखर यात्रा पहिलो पटक उनका आमाबुवाको सुरक्षाको लागि यात्रा थियो, जुन गृहयुद्धको छेउमा कतै देश भागे।
Xhaka को आमाबाबुले उनलाई एक नयाँ सुरुवात चाहिन्छ र 1990 मा, उनी स्विट्जरल्याण्डमा गए। तिनीहरूको पहिलो छोरा, Taulant, 1991 मा बासेल मा जन्म हुनेछ, 18 महिना पछि पछि Granit संग।
जस्तै ग्रेनिट Xhaka यसलाई राख्छ; "मेरो बुबाले अविश्वसनीय शक्ति देखाउनुभयो र Taulant र म आफ्नो मानसिक शक्तिको साथ उठेको छु, " Xhaka भन्छन्।
"हामी यो मूर्ति थियो, यो भूमिका मोडेल, जसले हामीलाई सिकाउनुभयो कि तपाईलाई चीजहरू प्राप्त गर्न बलियो हुनुपर्छ। त्यसैले हामी धेरै बलियो हुन्थ्यौं। यसैले पिचमा, हामीसँग यो चीजहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं र वास्तवमा यसको लागि जान्छौं। "
Xhaka सबै स्विट्जरल्याण्डलाई ओभरमा छ, र त्यहाँ त्यहाँ सिकाउने अवसरहरू, तर उसले आफ्नो कोसोवो-अल्बेनियन् जडहरू बिर्सन सक्दैन र उनीहरूलाई यो दिनलाई छुटाउन सक्दैन।
लियोनिता को हो? Granit Xhaka प्रेमी:
तल चित्रित आश्चर्यजनक श्यामला लियोनिता बाहेक अरु कोही व्यक्ति छैन, जो मोहित सुन्दरताको महिला हो। उनी ग्रेनिट ढाकाकी राम्री पत्नी हुन्। झाका जस्तो, लेकाज पनि कोसोभो अल्बानियन परिवारबाट आएका हुन्।
Xhaka पहिले लियोनिता देखि मिले, जबकि उनले अझै पनि आफ्नो पछिल्लो क्लब Borussia Monchengladbach को लागि खेलिरहेको थियो। उनी बन्डेस्लिला टोलीका लागि काम गर्दै थिए र स्विट्जरल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रियको आँखालाई समाते। साँच्चै, त्यो धेरै सुन्दर छ।
विशाल आइसक्रिम लिने बाहेक, दुबै प्रेमीहरू गर्मीको बिदाको लागि मियामी जान मन पराउँछन्।
अप्रिल २०१ 2017 मा, ग्रानिट झाकाले एकपटक फेन्सी ब्राउन सुट चढाएकी थिइन र घुँडामा उत्रिन् र आफ्नो साथीलाई बिहे गर्न माग्छिन्। लियोनिता लेकाजले हो भने, र उनी इन्स्टाग्राममा मनाईन्।
झाकाले उही तस्वीर आफ्नो इन्स्टाग्राम खातामा निम्न सन्देश सहित पोष्ट गरे। उनले हो भने। एक सुनौलो बल एक चमत्कार हो, सुनहरी पत्नी एक स्वर्ग हो! श्रीमती र श्रीमती झाहा।
ग्रेटित मुखियाले आफ्नो समय-समयमा सिजनमा आफ्नो लामो समयको प्रेमिका लियोनिता लेक्जलाई विवाह गरे।
स्विजरल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रियले इन्स्टाग्राममा दुलहीको साथ 'मिस्टर र श्रीमती' फोटो पोष्ट गर्दै ठूलो खबरको घोषणा गर्‍यो। तिनीहरूको विवाह जुलाई २०१ in मा भयो।
Granit Xhaka र लियोनिता Lekaj पछि खुशी खुशी बाँचिरहेका छौं।
Granit झाका पारिवारिक जीवन:
फेथर: रागीप झाका गर्व कोसोभेरियन थिए जसले एक पटक कोसोभोको तत्कालीन कम्युनिष्ट युगोस्लाभिया शासनको विरोध गरे कि उनी र उनका जनताहरु का अधिकार छ।
उहाँ उनीहरूको अधिकारका लागि खडा हुनुभयो र तिनीहरू आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू थिए, जस्तै मतदान गर्न सक्षम हुनु। यो कडा राजनीतिक थियो। ढाकाले भने, ... मेरो बुवाले सोध्यो:
'हामी यहाँ डेमोक्र्याट हौं किन? हामी प्रजातान्त्रिक बन्न योग्य छौं। हामी सुनुवाइको योग्य छ। '
पछि लम्बा Xhaka को उनको सरकार द्वारा गिरफ्तार गरियो। यो केवल उहाँ मात्र थिएन। त्यहाँ अरू चाचाहरू पक्राउ थिए, जसमा उनको चाचा, जसले धेरै वर्ष पहिले जेलमा राखेका थिए। उनले 15 वर्ष पाए। खराबी3वर्ष र आधाको लागि जेलमा सजाय गरिएको थियो।
"जहाँसम्म मलाई थाहा छ, जेलमा उनको पहिलो केही महिना ठीक थियो," Xhaka भन्छन्। "तर त्यसोभयो पिटेकाहरू।"
झाका सेनर्सको अपराधले बेलग्रेडमा कम्युनिष्ट केन्द्रीय सरकारको बिरूद्ध प्रदर्शनमा भाग लिनु पर्ने थियो। यो १ 1986 22 थियो र उनी २२ वर्षको विद्यार्थी थिए कोसोभोको प्रिस्टीना विश्वविद्यालयमा, जुन त्यतिबेला युगोस्लाभियामा एक स्वायत्त प्रान्त थियो।
उनी पक्राउ पर्ने थिए र छोटकरीमा छ वर्षको जेल सजाय दिइनेछ। झाका एसआरले अरु चार जना व्यक्तिसँग सेल सेल गरे र उनी दिनको एक पटक बाहिर जान्छन् - १० मिनेट को लागी।
Xhaks जारी ..."उनको छोराको रूपमा, कथा भनेको केहि छ कि मलाई धेरै गहिरो छ - यो साँच्चै मेरो हृदयमा छ"
झाको पनि जारी रह्यो ... "मेरो बुवालाई राम्ररी वर्णन गर्नका लागि तपाईले त्यसको पूर्ण गहिराइलाई बुझ्नुपर्दछ। यो धेरै दुखद छ। म कहिलेकाँही उहाँलाई सोध्छु: 'मलाई फेरी मलाई भन्नुहोस्,' तर मलाई अझै लाग्दैन कि उनले यो सबै खुलासा गर्‍यो।
त्यहाँ सँधै मौन क्षणहरू भएको छ जहाँ मैले महसुस गरेको छु उसले केहि निल्छ र सत्यलाई नचिताएको हुन्छ। हुनसक्छ यो एकदम धेरै थियो र ऊ आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण दुःख हटाउन चाहान्थ्यो।
एउटा अनौठो कुरा यो हो कि हामीलाई थाहा छैन किन रागीप झाकालाई उनको सजायको शुरुमा नै रिहा गरियो तर उसको काकाको साथसाथै उनलाई जान दिइयो।
परिवारको कसैलाई पनि थाहा थिएन कि उनीहरू ढोकामा नबढुञ्जेल। झाको भावना यो हो कि उनीहरूले जेलका नियमहरूसँगै जाने सम्झौता गरेका थिए, उनीहरूको मुख बन्द गरेर कुनै समस्या भएन।
यसैले उनीहरूले रिहा गरे किनकी उनीहरूले सोचे: 'तिनीहरूको साथ अब कुनै समस्या छैन'। तर कुनै पनि यसको बारेमा निश्चित छैन।
रागीप झाका जेलबाट छुटेपछि उनको जीवन अझ राम्रो गर्ने दृढ संकल्पले शक्ति प्राप्त गरेको थियो, जुन एक दिन उनका छोराहरूले फुटबल मैदानमा आफ्नै लडाईहरू लड्ने भावनामा परिणत हुने थियो। उनले आफ्नो परिवारलाई १ his 1990 ० मा प्रिष्टिना जिल्लाको पोडेजेभोबाट स्विजरल्याण्डमा बसाए।
मातृभाषा: झाको आमाको बारेमा सब भन्दा खुलासा गरिएको विवरण यो हो कि उहाँ पक्राउ र जेलिनु भन्दा तीन महिना अघि मात्र आफ्ना श्रीमानलाई भेट्नुभयो।
Xhaka एक पल्ट भने। “मलाई मेरी आमाप्रति अतुलनीय आदर छ। मैले कुनै महिलालाई एक पुरुषसँग तीन महिनासम्म सँगै बसेको - त्यो कान्छो उमेरमा - र साढे तीन वर्षसम्म उनलाई पर्खिरहेको मैले सुनेको छैन। मेरी आमा केवल एक अविश्वसनीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। "
जब एल्मेजे ढाका, आफ्ना भावी बुहारीहरूसँगै स्ट्यान्डमा बसिन्, उनले आधा साढे स्विट्जरल्याण्ड / अल्बानिया शर्ट लगाई। यद्यपि उनी स्विजरल्याण्डकी छिन्, तर एक तटस्थ प्रशंसक पनि किनभने उनका दुई छोराहरू बिभिन्न देशहरूमा खेल्छन्। उनी र उनकी बुहारी धेरै नजिक छन्।
भाइरस: टोलान्ट रागीप झाका (जन्म २ 28 मार्च १ 1991 XNUMX १) ग्रेनिट झाकाका ठूला दाजु हुन्। टाउलान्ट झाका एक पेशेवर फुटबलर पनि हो र एफसी बासेल र अल्बानिया राष्ट्रिय टोलीका लागि खेल्छन्। (लेख्ने समयमा जस्तै)।
सिस्टर: Agnesa Xhaka granit Xhaka को बच्चा बहिनी हो जसले पनि उनको मनपर्ने भाइ हो।
एक दिन Granit Xhaka उनको जन्मदिन प्रायोजित। एग्नेसा झाकाले उनको दु: खको बारेमा मीठो शब्द लेखिन् र यसलाई तस्वीर सहित पछ्याउँछिन्। तर के कुराले बढी ध्यान आकर्षित गर्छ भन्ने कुरा उसले तस्वीरमा लेखेको टिप्पणी हो। यो भन्छ ...
"म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तिमी संसारमा सब भन्दा राम्रो भाइ हौ," उनी लेख्छन्, उनीहरूले उनको तत्काल बडा भाई वर्णन गरेकी छिन् "मनपर्ने"। यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि ग्रानिट आफ्नो जेठो दाज्यूलाई भन्दा धेरै माया गर्थे। यसै बीच, टौलान्टको इन्स्टाग्राममा कुनै पोष्ट छैन योसँग मिल्दो।
Granit Xhaka व्यक्तित्व:
ग्रेनिट Xhaka को उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
Granit Xhaka का शक्तिहरु: उहाँ सहकारी, कूटनीतिक, दयालु, निष्पक्ष दिमाग र सामाजिक हुनुहुन्छ।
ग्रानिट झाका कमजोरीहरू: उनी असीम हुन सक्थे। त्यसोभए, उहाँ टकराउहरूसँग डराउनुहुन्छ र हजुरआमा लगाउने आदत छ।
कुन Granit Xhaka लाई मनपर्छ: दयालुता, अरू र बाहिरको साथ साझेदारी गर्दै।
कुन Granit Xhaka नापसंद: हिंसा, अन्याय, loudmouths र अनुरूपता।
सामान्यतः, ग्रेनिट Xhaka शान्त, निष्पक्ष हो, र तिनीहरू एक्लै रहन घृणा गर्छन्। साझेदारी उहाँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
Granit Xhaka अनटाल्ड जीवनी तथ्य - संक्षिप्त मा क्यारियर:
झाकाले आफ्नो क्यारियर गृहनगर क्लब बासेलमा शुरू गर्यो जसले पहिलो दुई सत्रमा स्विस सुपर लीग जित्यो। त्यसपछि उनी २०१२ मा बुन्डेस्लिगा टोली बरुसिया मिन्चेन्गालाडबचमा सरे। उनले आफ्नो स्वभावको लागि आलोचनाको साथ टेक्निकल रूपमा प्रतिभाशाली खेलाडी र प्राकृतिक नेताको रूपमा ख्याति कमाए।
उनी २२ वर्षको उमेरमा २०१ Bor मा बोरुसिया मिन्सेन्ग्लैडबचको कप्तान बनेका थिए जसले दोस्रो लगातार सत्रमा युईएफए च्याम्पियन्स लिगको लागि टोलीको नेतृत्व गर्‍यो। उनले मे २०१ 2016 मा million० करोड डलरको शुल्कमा आर्सेनलमा उच्च प्रोफाइल स्थानान्तरण पूरा गरे। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Granit Xhaka जीवनी - पुरुषों का नेता:
बरूसिया म्यान्चेन्गालाबाचले २०१//१2015 सत्रमा सबैभन्दा खराब सुरुवात गरे जब उनीहरूले पहिलो पाँच लिग खेलहरू गुमाए पछि अन्तिम मरे।
प्रबन्धक लुसियन फाभरेले तुरुन्तै राजीनामा गरे र आन्द्रे शुबर्टले पदभार लिए। कप्तान टोनी जान्त्स्के घाइते भएपछि, शुवर्टले आफ्नो २rd औं जन्मदिनको केहि दिन अगाडि आर्म्बान्ड झालाई हस्तान्तरण गरे। उनी आफ्नो देश स्विजरल्याण्डका कप्तान पनि नियुक्त भए।
"हामीले ग्रेनिट रोज्यौं किनभने उहाँ हाम्रो लागि एक धेरै महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुनुहुन्छ," Schubert ले भन्यो। "उहाँसँग गुण छ तर उसले जिम्मेवारी लिन पनि सिक्नुपर्दछ।"
यो कदम चमत्कार कार्य गर्दछ जब M asnchengladbach चम्पियन्स लिग स्पटहरूको दौडमा फिर्ता आयो। कप्तानको रूपमा पहिलो खेलमा पनि गोल गर्दै, झाको अगाडिबाट नेतृत्व भयो। उनको नेतृत्वमा र शुबर्टको रणनीतिक नौसेना, मिन्चेng्गलाद्वाच अन्ततः चौथो स्थानमा छ र चैम्पियन्स लिग प्लेअफ राउन्डका लागि क्वालीफाई भयो।
केवल 23 मा टोलीको नेतृत्व गर्न कुनै मजाक छैन। Wenger ले पनि त्यहि कुरा साथ गरे Cesc Fabregas र उसको वरिपरि गुणस्तरीय खेलाडीहरूको सर्तमा आवश्यक समर्थन नभए पनि, स्पेनियार्डले उनीहरूलाई शीर्ष-चार फिनिश र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा प्रेरणा दियो।
समय बित्ने क्रममा टोलीको नेतृत्वमा सुपराबा खेलाडी हुन सक्दछ र व्यानरले स्पष्ट रूपमा पार्कको मध्यमा केही थप अनुभवी र भरोसेमंद टाउको चाहिन्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Granit Xhaka बचपन कहानी प्लस अनउठाइएको जीवनी तथ्यांक पढ्न को लागी धन्यवाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.